Glass fibre nanamafy resin tafo taratasy RY720-B - China Hubei Shengyu fitaovam-panorenana
FOB Price: 5.65-9.99 / metatra toradroa
Shengyu synthetic resin tafo taratasy, mifono amin'ny Geloy ASA resin, dia manokana 3-sosona mpiara-extruded tafo taratasy. Nentim-paharazana tafo taila lamina amin'ny manan-karena eo amin'ny mazava loko slab izay dia mora ny hametraka. Izy io dia tena matanjaka slab, mahatohitra ny rivotra sy ny havandra, dia afaka ihany koa azo ampiasaina izay avo no takina esthetic antony. Inona no kokoa, dia mbola miovaova ny lokony sy ny fananana ara-batana eo ambany hiringiriny-Violet taratra, dampness, hafanana, chillness sy ny fiantraikany.
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm araka izay ilaina (integer maro ny 219) 6kg ± 0.1kg Matte na malamalama Blue, Bright Red, Gray, Deep Red, Terracotta
Araka ny sosona ambony fitaovana, Geloy resin injeniera atao amin'ny GE dia faran'izay mety ho fampiasana ivelan'ny trano. Na tratran'ny hiringiriny-Violet taratra, dampness, hafanana, chillness sy ny fiantraikany, ny vokatra sisa ny fahamarinan-toerana ny loko sy ny fananana ara-batana. Fitsapana natao tany ho Antitra Mihitsy Test afovoan'i Arizona sy Florida manaporofo izay kely noho △ E 5 ao anatin'ny 10 taona.
Shengyu synthetic resin tafo taratasy manana fahafahana matanjaka ho an'ny be-jaza izy. Ny fitsapana, nitarika ny Shanghai Municipal Building Material Component Quality Fanaraha-maso sy Test Station, manaporofo fa tsy misy hirika amin'ny toe-660mm manohana androm ary nampihatra entana 150kg.
iray tapa-720mm fitsipika tafo taratasy milanja 5.9 ± 0.1kg.
Next: High temperatuer & harafesiny fanoherana tafo taratasy
Nandritra ny manazava, ny vokatra dia tsy tokony hatsipy mba tsy manimba na Scratching ny vokatra ambonin'ny. Fa single lamba intsony noho ny 8m, ampy manohana ny hevitra Tena ilaina mba tsy ny famoretana ny kapila tanimanga.
Masìna ianao, vorio ny fingotra peratra tantera-drano any an-gasket alohan'ny manamboatra ny roof.The screws tsy hisy hitsatoka tightly.Finally loatra hanosika ny tantera-drano tao amin'ny screws fonony mafy.
screws raikitra tsy maintsy mitsangana ny taratasy surface.Screws amin'ny halavan'ny savaivony 75mmand ny 6.3mm no ilaina ny manamboatra ny tena kapila tanimanga.
Shengyu resin taratasy dia hampiharina amin'ny tafo pitches avy amin'ny 20 ka hatramin'ny 80.For ny dity any an-dafin'ny isan-karazany io, dia tokony ho fepetra manokana noraisina nandritra ny fametrahana.
1. Deck rafitra
ho etỳ ambonin'ny ny tokotanin-tsambo dia tokony ho malama, ny ara-nofo ny tokotanin-tsambo kely dia tokony ho ny deformation, ny tokotanin-tsambo tokony ho mihoatra ny 12mm matevina (araka ny purlin androm).
A 3-5mm elanelana eo amin'ny roa miravaka Tena ilaina ho an'ny deformation.
Ny tantera-drano namelatra horonam tokony hampandeha tsara, ary mitsangana amin'ny overlaps marina.
2. Steel firafitry
ny lafiny ny rafitra vy dia tokony ho marina maso mandritra ny fanodinana, izay hanan-kery ny dity ny amin'ny tampon-trano. Ny fahadisoan-dàlana ny lafiny hampandrenesako uneven tafo.
Ali ny steels tokony ho tsaboina manohitra ny harafesiny.
3. nanamafy mivaingana rafitra
ny underlay ny simenitra tsy misy vokany lehibe eo amin'ny evenness ny amin'ny tampon-trano, raha ny nandinika lalina sy purlins Manisika dia tokony ho tena milamina sy fiaramanidina.
Samy nandinika lalina vy sy ny hazo ary ny purlins Manisika tokony ho anti-harafesiny tsaboina hanitatra ny fiainam-tampon-trano ny rafitra.
Vy purlins tokony welded ny vy sy ny hazo nandinika lalina Manisika purlins azo nofantsihina teo amin'ny hazo nandinika lalina Manisika mivantana.
Tandremo! Tsy misy tafo kapila tanimanga afaka mamaha tanteraka ny olana ny tsy tantera-drano ho azy, ho an'ny trano ara-dalàna, dia tokony ho underne
1. Anti-harafesiny fitsaboana: Metal purlins tokony mifono iray sosona anti-harafesina loko roa sosona ny vita coatings. Wood purlins tokony mifono amin'ny anti-asfalta harafesiny na menaka.
2. an-tampony dia tokony hanana 180mm purlin lavitra avy ao amin'ny tandavan-dalana mba hametraka ny Ridge taila.
3. Ny purlin ambany dia tokony hanana 50-70mm lavitra avy amin'ny eave.
4. Ny purlin toerana dia ho an'ny Royal Tile 660mm.
Shengyu resin tafo taratasy manana coefficient ny Linear fanitarana ny 0.0000493 / ℃ .In mba hamela Linear fanitarana ara-dalàna ny taratasy, dia manoro hevitra ny fandavahana lavaka amin'ny savaivony 2-3mm lehibe kokoa noho ny an'ny visy, ary avy eo dia hanao ny famerana ny tsy misy dilatation ny sheet.Please dia tsy ho mafy loatra ny famerana.
Fametrahana ny Main Tile
Hanitsy ny fampifanarahana dia tena zava-dehibe ny na inona na inona karazana tafo rafitra, ihany no mety ny fanitso ho tafavory akaiky sy straightly ny mitsangana tsipika tokony ho 50 ~ 70mm ny afovoan'i sidewall ho gabled tampon-trano, ary marindrano andalana 150mm ka hatrany ambany purlin .
Apetraho voalohany taratasy ho akaiky araka izay azo atao ny tsipika mitsangana fanorenana, amboary ny voalohany teo amin'ny kapila tanimanga mitsangana faharoa laharana, araka ny fanohanana framework.The laharana voalohany dia tsy maintsy eo ambany tsy misy toe-javatra azo perforated.
Fixings tokony nivory tany ahevaheva crest ny kapila tanimanga.
Mila fikarakarana manokana mba ho entina rehefa milahatra ny laharana voalohany, satria tamin'ny fanitso na dia ela ny eny soson'ny millimeters vitsivitsy isaky ny taratasy dia afaka mamorona olana.
Ary handeha hanao famerana ny faharoa, hifanindry ny taratasy faharoa azy tsy hiala teo ny voalohany sy nifidy amin'ny tena screws tamin'ny andro voalohany kapila tanimanga ambany indrindra izay mifanaraka amin'ny hifanindry.
Hitandrina ny marina fampifanarahana ny fixings no fahazoan-dalana ny fampiasana ny tady boky raikitra mafy loatra ny vatan-kazo.
Tohizo Toy izany koa ny fahatelo, ary nivoaka fanitso, ary indray mijery ny toe-javatra nisy ny efatra fanitso, dia nifidy kapila tanimanga hafa rehetra.
Vorio ny taratasy Toy izany koa hatramin'ny farany iray, raha ilaina, ny sakan'ny lamba ny farany dia mety tsy maintsy ho faty araka izany.
Tandremo! Taratasy rehetra dia tokony ho nivory tahaka ny akaiky araka izay azo atao ho an'ny olona nifanindry.
Fa ny andalana faharoa dia fahazoan-dalana tahaka ny amin'ny mandrakariva fa manomboka avy any ankavia miaraka amin'ny taratasy izay tapaka amin'ny antsasany lengthways (telo andalana taila) .This mamela anao hanohy amin'ny marindrano ny nivembena hifanindry andalana, ary ny toy izany anao tsy ho crossover ny taratasy efatra teo amin'ny hifanindry.
Ny sisa nanapaka taratasy tamin'ny voalohany dia tsy mba very maina amin 'ny mety ho ampiasaina any amin'ny faran'ny ny tafo toy ny fanitsiana.
Fenoy ny lafiny mifanohitra tahaka azy koa.
-Dalana, ny andalana taila mitsangana eo amin'ny lafiny mifanohitra miaraka amin'ireo ao amin'ny voalohany, mba hivory ny Ridge kapila tanimanga.
Tandremo! Fa ambany indrindra hantsana na amin'ny rivotra na rainly faritra dia mety ny asio tombo-kase ny hifanindry amin'ny resin sealant na silisiôma sealant.
Fa ny telozoro lafiny iray hantsana efatra tafo, ny taratasy voalohany dia tokony ho nanomboka avy afovoany, dia mbola samy ankavia sy mahitsy lalana.
Hetezo ny taratasy teny an-valahana tsipika mba asesemble diagonal Ridge
Ny fametrahana ny Ridge kapila tanimanga iray dia tokony hanomboka side.For voalohany kapila tanimanga, dia tokony ho antsasaky nanapaka mba tsy ny crossover efatra lambam-pandriana teo amin'ny hifanindry.
Self-screws amin'ny 75mm halavan'ny sy ny savaivony ny 6.3mm dia ilaina ny manamboatra ny Ridge kapila tanimanga ho any amin'ny lehibe fikarakarana tile.Take tsy mba hamaha ny tandavan manakaiky ny sisin'ny ka noho izany tsy mba manana olana infiltration.
Ary ny amin'ny fametrahana ny diagonal Ridge, dia tokony hitovy hitandrina mahitsy ny valahana line.Self-screws amin'ny halavan'ny sy 75mm ny savaivony 6.3mm no ilaina mba hamaha efa voarafitra mialoha sisiny ho an'ny lehibe Ridge kapila tanimanga tile.Diagonal tsy maintsy nametraka from ambany ny ambony tamin'ny hifanindry ny 50mm.
A telo-fomba fifandraisana no ampiasaina ho toy ny singa nandray anjara eo amin'ny Linear Ridge sy ny diagonal anankiray ho efatra tafo hantsana.
Ny Comer namorona ny fidirana roa mifanojo pitches dia antsoina hoe ny valley.Position sy manamboatra ravin roa mitovy, 240 MG avy amin'ny afovoan-Comer, mitovy amin'ny Comer an-dohasaha.
Amboary ny lohasaha fantsona natao tao amin'ny synthetic resin tontonana na vy eo amin'ny fampiasana ravin-tena screws na fantsika.
Nandrisika lohasaha horonan-taratasy Azo ampiasaina amin'ny lohasaha gutter.Position teo an-jorony manomboka amin'ny tsipika Ridge, mametraka azy; tsara ny slab.Begin mba hanamboarana ny tafahoatra sisin'ny an-dohasaha ny mampiasa ravin-tena screws na fantsika.
Ny taratasy mifandraika amin'ny lohasaha tsipika tsy maintsy mialoha miendrika alohan'ny toerany, fa namela ny mety mba hahantonay ho indray, rehefa manamboatra, mba manana tanteraka tsipika mahitsy lohasaha.
Ampiasao sidewall mifandrambondrambona natao tao Shengyu resin tontonana na metaly, hanaraka ny manelatselatra birao amin'ny rindrina sy ny taila ny tena screws na fantsika ka asio tombo-kase ny farany ambony kokoa ny manelatselatra amin'ny silisiôma sealant.
Connection Amin'ny Chimneys
Ampiasao synthetic resin na vy fankatovany, hifikitra ny manelatselatra birao amin'ny rindrina sy ny taila ny tena screws na fantsika ka asio tombo-kase ny ambony faran'ny mifandrambondrambona amin'ny silisiôma sealant. (Jereo ny kisary eo ambony)
fankatovany no soso-kevitra mba ho ampiasaina amin'ny toerana amin'ny alalan'ny vy board, toy ny tafo pitches sy ny toerana misy ny chimneys no miova ho an'ny tampon-trano samy hafa.
Aluminum na tafo horonam Azo ampiasaina noho ny fifandraisana misy eo taila sy chimney.Stick fitehirizan-taratasy ho any amin'ny fanitso manodidina ny chimney.Fix ny faran'ny horonam hafa mba fivoahan-tsetroka ny fantsika ary avy eo dia asio tombo-kase ny farany ambony kokoa.
Connection Amin'ny Skylight
Ny taratasy dia tsy maintsy mivory ao amin'ny fomba mahazatra mandra-mahazo manakaiky ny skylight.
Raiso fandrefesana marina ny skylight, manao marina slot ny taratasy miaraka amin'ny malefaka polisher na portable manify-nify tsofa.
Hifanindry nitarika miankina ny ambany tiled fifandraisana eo amin'ny taratasy sy manefy azy amin'ny tanana mba hifanaraka tsara ny taratasy.
Avy eo, mametraka ny taratasy miendrika, miendrika Tsara ihany ny lafiny fifandraisana sy ny ambony sy ny hifanindry amin'ny ampahany, amin'ny faran'ny ambany noho ny firaka singa miankina amin'ny voka-ny lafiny ambany ny skylight.
Rehefa vita ny mivory ny diagonal Ridge, ampidiro eto ny alalan'ny terminal diagonal Ridge sombin tany ambany indrindra diagonal faran'ny Ridge, ka amboary ny diagonal Ridge ny rivets.
Fibre mitafo fanitso Roof Sheet
Plastic fibre Roof
Fibre Sheet Fa tafo
Fiberglass Roofing Fitaovana
afo Retardant Plastic Roof Sheet
Long zehiny Roofing Sheet
Plastic PVC Roofing Sheet Fa nalatsaka
PVC Material fitaovam-panorenana Roof taila
Rain fiarovana Roofing Sheet
Tafo Shingles Sheets
Royal Plastika Roof taila
manjary efajoro Roof Sheet
Atrikasa Roof Tile